Shadesy Shifty Shifty - စာအုပ်နှင့်မည်သူမဆိုရှာတွေ့နိုင်သောရုပ်ရှင်နှင့်ခြားနားချက် ၁၀ ခု | eReaders အားလုံး
Villamandos | | ယေဘုယျ, စာအုပ်များ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည့်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုကိုမည်သူမျှမလွဲချော်ပါ Grey ကငါးဆယ် Shadesအယ်လ်ဂျိမ်းစ်ကလက်မှတ်ထိုးထားပြီးယခုအခါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိရုပ်ရှင်ရုံများကိုဒုတိယအရောင်းအဝယ်ဖြင့်ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းဖြင့်ဖြန့်ကျက်နေပြီဖြစ်သည်။ အရိပ်ငါးဆယ်မှောင် Christian Grey နှင့် Anastasia Steele သရုပ်ဆောင်ထားသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သောစာဖတ်ခြင်းသည်သံသယဖြစ်စရာမလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဂရိန်းကိုဇာတ်ကောင်ဇာတ်ကောင်အဖြစ်ပြသရန်ရည်ရွယ်ထားသောစာအုပ် ၄ အုပ်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ရသည်ဟုမည်သည့်အခါကမျှမဖုံးကွယ်ခဲ့ပါ။ မနေ့ကလည်းရုပ်ရှင်ရုံကိုသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့အတူသွားတွေ့တယ် အရိပ်ငါးဆယ်မှောင်ကိုရှာဖွေအားသာချက်ယူပြီး စာအုပ်နှင့်မည်သူမဆိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောရုပ်ရှင်အကြားခြားနားချက်များ သိပ်အားထုတ်မှုမပါဘဲ။
2 ဒေါက်တာ Flynn သည်ကြီးစွာသောပျက်ကွက်
5 Kate သည် Ana နှင့် Grey တို့အကြားစာချုပ်ကိုမည်သည့်အခါကမျှမသိရှိခဲ့ပါ
6 Jack Hyde ဟာလေလံပွဲမှာပါ
9 Sawer ရဲ့မရှိခြင်း
ရုပ်ရှင်နှင့်စာအုပ်အကြားပထမဆုံးခြားနားချက်ကိုစတင်သည်နှင့်ချက်ချင်းတွေ့ရှိသည်။ အရိပ်ငါးဆယ်မှောင် နှင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ငါတို့ဖတ်တဲ့အရာပေါ်အခြေခံပြီးငါတို့မျှော်လင့်ထားတာထက်လုံးဝကွဲပြားတဲ့နည်းနဲ့စတယ်.
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Ana ဟာသူမရဲ့သူငယ်ချင်းဓာတ်ပုံပြပွဲကိုသွားပြီးသူမရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီး Christian Grey နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာပါ။ စာအုပ်ထဲတွင်သူမသည်ပြပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးသူမကိုပထမဆုံးကားနှင့်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပြပွဲမှထွက်ခွာချိန်၌လမ်းကြား၌တွေ့ရသည့်အနမ်းမှာပျောက်ဆုံးနေသည်။
ဒေါက်တာ Flynn သည်ကြီးစွာသောပျက်ကွက်
ရုပ်ရှင်ကနေအကြီးအပျက်ကွက်ခြောဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ် Flynn, ခရစ်ယာန် Grey ရဲ့စိတ်ရောဂါ။ စာအုပ်ထဲတွင်သူသည်အဓိကအခန်းကဏ္ has မှပါ ၀ င်သည်။ သူသည် Ana ၏သံသယများစွာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီးလူတိုင်းကကြည့်နေစဉ်သူမနှင့်အတူကခုန်နေသည့်ဘောလုံးကိုသူတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကားရုပ်ရှင်တွင်ဤဇာတ်ကောင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊
ရုပ်ရှင်များသည်နာရီပေါင်းများစွာကြာရှည်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ကိစ္စများစွာတွင်၎င်းတို့သည်စာအုပ်များတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုတိကျစွာမဖော်ပြနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည်။ En အရိပ်ငါးဆယ်မှောင် ဒီဟာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပျက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်ပထမဆုံးပရဟိတလေလံပွဲမရှိဘူးအဲဒီအစား, အားလုံးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုတည်းလေလံပွဲတွင်အာရုံစူးစိုက်သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အယ်လီနာနှင့်အာနတ်စတီးယားတို့အကြားပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုသို့မဟုတ် Grey ကသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကခုန်ခြင်းအတွက်ပေးဆပ်ရသောရယ်စရာငွေပမာဏကြားပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်မစ္စစ်ရော်ဘင်ဆင်၏မှားယွင်းမှုကို Ana သို့အပြည့်အ ၀ မဖတ်ရသေးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်ထဲတွင်အသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါက။
EthanKate ၏အစ်ကိုသည် Ana ၏အခန်းဖော်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်သည့်သူသည်ရုပ်ရှင်နှင့်သူပါဝင်ပတ်သက်သည့်စာအုပ်တွင်ဥပမာအနေဖြင့် Grey ၏ယခင်လက်အောက်ခံ Anastasia နှင့် Leila အကြားဇာတ်လမ်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။
ဤဇာတ်ကား၏ရုပ်ရှင်မှတဆင့်လျင်မြန်စွာစီးဆင်းသွားသောအခါသူမအရက်အလွန်အကျွံသောက်နေသောကြောင့် Ana နှင့်ခရစ်ယာန်တို့၏ဒေါသကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမည်။
Kate သည် Ana နှင့် Grey တို့အကြားစာချုပ်ကိုမည်သည့်အခါကမျှမသိရှိခဲ့ပါ
စာအုပ်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သောကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် Kate, Ana ရဲ့သူငယ်ချင်းဤကွက်လပ်ရှိအက္ခရာများသည် Grey ၏လက်အောက်ခံမည့်စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုညှိနှိုင်းသည့်အီးမေးလ်အချို့ကိုတွေ့ရသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ကျွန်တော်ဒီတော့ဘယ်တော့မှရဘယ်တော့မှ Anastasia ရဲ့အီးမေးလ်တွေအကြောင်းသူ့သူငယ်ချင်းကိုရှင်းပြတာလည်းမတွေ့ရပါဘူး သောကျော်ကြားစာချုပ်ဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်။
Jack Hyde ဟာလေလံပွဲမှာပါ
ကစတင်ခဲ့သည်သောလက်စားချေ ဂျက်ဟိုက်, Ana ရဲ့သူဌေးသူ စာအုပ်အစောပိုင်းကရုပ်ရှင်ထက်အစောပိုင်းကပေါ်လာသည် ပြီးတော့ Grey ရဲ့မိသားစုရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးသူကမျက်နှာဖုံးစွပ်ဘောလုံးထဲမှာသူ့ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ သူဟာမိတ္တူကိုယူပြီးသန်းကြွယ်သူဌေးရဲ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပတဲ့အခါသူပြန်ပေါ်လာတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုအများဆုံးစွဲစေသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ Christian Grey က Anastasia ကိုသူနဲ့အတူနေဖို့သွားခိုင်းတယ်။ ဒါဟာညသန်းခေါင်မှာဖြစ်ပျက်ပြီးအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ဇတ်ကောင်ကသူဟာကြီးလေးတဲ့၊
စာအုပ်ထဲတွင်အဆိုပြုချက်သည်လီလာ၏ဇာတ်လမ်းကိုရှင်းပြပြီးသည့်နောက်နိုးကြားနေသောဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး နှင့်အတူဖြစ်သည်။ အဆိုပြုလွှာ၏အဖြေသည်ရုပ်ရှင်နှင့်စာအုပ်နှစ်ခုလုံးတွင်တူညီပြီးအလင်းပါသောသော့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
၏ရှေ့မှောက်တွင် အယ်လီနာ Christian Grey ၏ living ည့်ခန်းတွင်သူ၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်၊ နားမလည်နိုင်သည့်ရှင်းလင်းချက်မရှိပါ။ စာအုပ်တွင်သူရောက်လာသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူနေမကောင်းဖြစ်ပြီးအလုပ်သို့မသွားတော့ဟုပြောရန်ခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေသူတစ် ဦး ကရှင်းပြချက်သည်ပျောက်ဆုံးနေသည်မဟုတ်သော်လည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရှာဖွေရန်ရုပ်ရှင်ရုံသို့သွားသောကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်လေထဲတွင်သံသယရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Grey က Ana ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နှင့်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ငှားရမ်းထားသည့်ကိုယ်ရံတော်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်သူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မပေါ်ထွက်ပါ၊ စာအုပ်ထဲတွင်သူသည် Anastasia နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာမှတ်ချက်ပေးထားပြီး Grey သည်အယ်လီနာအားငယ်ရွယ်သောရည်းစားထံစာရေးခဲ့သည့်စာတစ်စောင်ကိုလည်းပေးခဲ့သည်။
စာအုပ်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့သောသီးခြားမြင်ကွင်းအမြောက်အများမရှိခြင်းသည်ဥပမာအားဖြင့်သူတို့ vanilla ရေခဲမုန့်ကိုစားသည့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်စာအုပ်ပါလိင်အားလုံးရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပေါ်လျှင်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်နာရီပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်များစွာသောကြာရှည်လိမ့်မည် ရက်ပေါင်း။
သင်ရုပ်ရှင်အကြားနောက်ထပ်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီ အရိပ်ငါးဆယ်မှောင် နှင့်စာအုပ်?။ ဤစာမူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » စာအုပ်များ » Shifty Shades Fighter: စာအုပ်နှင့်မည်သူမဆိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောရုပ်ရှင်နှင့်ခြားနားချက် ၁၀ ခု
#MakeAscendantMovie (@mirzacanche) ဟုသူကပြောသည်
ရုပ်ရှင်ရုံတွင်မတွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းများသည်ရုပ်ရှင်၏ DVD ၌ဖြစ်လိမ့်မည်… BY by God !! ယခုအချိန်တွင်သူတို့သည် ADAPTATION ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်နိုင်ကြပါ။
#MakeAscendantMovie (@mirzacanche) ကိုစာပို့ပါ